Waa'ee gingilchaa XML
Gariin gingilchitootaa akka qaama dirqalaatti yeroo ijaarsa LibreOffice qofa jiraatu. Gingilchaa dirqalaa ijaaruuf, fayyadama qindoomna LibreOffice fiigsisi, "Fooyyeessi" filadhu, itti aansuun gingilchaa tarree muraa keessatti barbaaddu filadhu.
Jechi gingilchaa XML kan armaan gadii keessatti akka qaxxaamuraatti ibsa caalaatti sirrii ta'eef akka Gingilchaa XSLT irratti hundaa'eetti fayyadu.
Afaan Jijqeeqata Dheertoo
Afaan Baallee Akkaataa Dheertoo
Jijjirraa Afaan Baallee Akkaataa Dheertoo. Faayilootni XSLT baalleewwan akkaataa jedhamunis ni waamamu.
Gingilchaan aleergii XHTML "XHTML 1.0 Jabaa" gataa'aa Barreessaaf, Calc, Fakkaasi, fi Toleessaa galmeewwanii.
Tarreewwan maqaa fi gosa gingilchitoota ijaaraman agarsiisu.
Gingilchicha filachuuf cuuqaasi.
Gingilchitoota heddoo filachuuf, Shift-cuqaasi yookaan AjajaCtrl-cuqaasi.
Gingilchaa gulaaluuf maqaa lama cuqaasi.
Akka qarqabatti olkaa'i
Title is: Ijaarsa Gingilchaa XML